China Precision Metal Machining orinasa sy mpanamboatra |manan-tsaina
KARAZANA ATAON'NY MASIN'NY vy
Ny mahazatra indrindra sy ny iray amin'ireo asa machining manan-danja indrindra dia:
● Mihodina – Ity asa ity dia atao amin'ny fitaovana iray izay mihodinkodina raha toa ka misy fitaovana iray manala akora ao anatiny.Ny tanjona lehibe amin'ny fampandehanana fihodinana dia ny fahazoana endrika cylindrique amin'ny akora karakaraina.
● Fandavahana – Fampiasana fitaovana mihodina amin'ny fanaovana lavaka boribory eo ambonin'ny akora.Ny fihodinana ampiasaina (matetika bitika) dia manana sisiny roa manapaka izay manana ny asany lehibe amin'ny fanaovana ny lavaka boribory.
● Fikosoham-bary – Misy karazany roa ny fikosoham-bary: fikosoham-bary periferika sy tarehy.Na dia atao amin'ny fomba sy fitaovana samy hafa aza, ny tanjona fototra amin'ireo karazana fikosoham-bary roa ireo dia manana tanjona lehibe iray - ny hamorona endrika tsotra sy mahitsy.
Fanohanana an-tserasera, fanohanana an-tserasera
Stainless vy, varahina, aluminium, vy, vy...
Loko tany am-boalohany metaly
Taorian'ny Service Warranty
Fanohanana ara-teknika video, fanohanana an-tserasera, piesy, ...
Tatitry ny fanaraha-maso/ fanamarinana kalitao
Tobin'ny milina seramika;Fitaovana mekanika seramika;Fizarana milina seramika;Precision Ceramic
Endriky ny sary
MANINONA NO ZAVA-DEHIBE NY METAL METAL
● Mety amin'ny fanodinana fitaovana isan-karazany;
● Afaka mamorona endrika geometrika isan-karazany toy ny lavaka boribory marina, kofehy visy, sisiny mahitsy, ary koa ny surface;
● Manome marina tsara refy sy fiaramanidina ary mahitsy ambonin'ny farany;
● Ny machining metaly dia mamela ny fametrahana mazava tsara mandritra ny famoronana ny endrika farany irina, ny refy, ny habeny ary ny endriny farany.
● Ity dingana ity dia manome valiny miaraka amin'ny famaritana geometrika izay tsy azo noforonin'ny dingana hafa.
● Ity karazana machining ity dia azo ampiasaina amin'ny dingana famokarana maro mandritra ny asa toy ny fanariana, ny sary bar ary ny forging.
1. Taratasy miaraka amin'ny vokatra: Tatitry ny fisafoana + Tatitry ny calibration(fitaovana fandrefesana) + Taratasy momba ny kalitao + Faktiora + Lisitry ny fonosana + Fifanarahana + Bill of Lading(na AWB).
2. Raharaha plywood fanondranana manokana: boaty hazo tsy misy fumigation aondrana.
1. Hanolotra fanohanana ara-teknika ho an'ny fivoriambe, fanitsiana, fikojakojana.
2. Manolotra ny famokarana &inspection horonan-tsary avy amin'ny fifantenana fitaovana ho amin'ny fanaterana, ary ny mpanjifa dia afaka mifehy sy mahafantatra ny tsipiriany rehetra amin'ny fotoana rehetra na aiza na aiza.
teo aloha: Precision Gauge Block
Manaraka: Precision Casting
fototra milina metaly mazava tsara
ampahany amin'ny milina metaly mazava tsara
singa mekanika metaly mazava tsara
Stainless Steel Universal Joint, Plate fandrefesana granita, Precision Granite Cube, Precision Granite, Kodiaran'ny horonam-boky mitsivalana, Precision Granite Square Ruler,